ဘယ်လိုသင့်ရဲ့မျက်စိသည်သင်တို့၏အကြံအစည်အပ်နှံ - သတင်း Rule
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “ဘယ်လိုသင့်ရဲ့မျက်စိသည်သင်တို့၏အကြံအစည်အပ်နှံ” မို Costandi ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com အင်္ဂါနေ့က 2nd ဇွန်လအပေါ်များအတွက် 2015 09.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အဟောင်းကိုစကားကိုအလိုအရ, မျက်စိကိုစိတ်ဝိညာဉ်ထဲသို့ပြတင်းပေါက်များမှာ, ကျွန်တော်တို့မဟုတ်ရင်ဖုံးကွယ်ထားချင်စေခြင်းငှါနက်နဲရာစိတ်ခံစားမှုကိုထုတ်ဖော်ပြောဆို. ခေတ်သစ်သိပ္ပံပညာစိတ်ဝိညာဉ်၏တည်ရှိမှုမရှိချေပေမယ့်, ဒါကြောင့်ဒီစကားပုံအမှန်တရားတစ် kernel ကိုရှိကွောငျးအကြံပြုပါဘူး: ဒါကြောင့်ဦးနှောက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာရောင်ပြန်ဟပ်ဒါပေမယ့်လည်းငါတို့အမှုအရာသတိရဘယ်လောက်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုအောင်မသာမျက်စိကိုထုတ်လှည့်.
ငါတို့မျက်မှောက်အဆက်မပြတ်ရွေ့လျားနေကြသည်, အဲဒီလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုသတိထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိနေစဉ်, ထိုသူတို့တွင်များစွာသောသူတို့ကိုစဉ်မှာပေါ်ပေါက်. ကျွန်တော်တို့ဖတ်ရတဲ့အခါ, ဥပမာအားဖြင့်, ကျွန်တော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုစကားလုံးအပေါ်လျှင်မြန်စွာ fixate ကြောင်း saccades ဟုခေါ်တွင်အလွန်လျင်မြန်မျက်စိလှုပ်ရှားမှုတစ်စီးရီးလုပ်. ကျွန်တော်တစ်ဦးအခန်းထဲသို့ဝင်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ပတ်ပတ်လည်ကြည့်ရှုသကဲ့သို့ငါတို့သည်ပိုကြီးသိမ်းကျုံး saccades လုပ်. ထိုအခါအငယ်ရှိပါတယ်, ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်သကဲ့သို့ငါတို့လုပ်အတင်းအဓမ္မမျက်စိလှုပ်ရှားမှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးခေါင်း၏လှုပ်ရှားမှုအဘို့အလျော်ကြေးပေးနှင့်ကမ္ဘာ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်တည်ငြိမ်ရန်. နှင့်, ဟုတ်ပါတယ်, ကြှနျုပျတို့မကျြစိကို 'လျင်မြန်စွာမျက်စိလှုပ်ရှားမှု' 'စဉ်အတွင်းပတ်ပတ်လည်ပြေး (REM) အိပ်စက်ခြင်း၏အဆင့်.
အဘယျသို့ယခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်စိလှုပ်ရှားမှုအချို့ကိုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေး process ကိုထုတ်ဖေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထုတ်ဝေသောသုတေသနကွောငျးဖျောပွသ ကျောင်းသားအလိုလိုကြီးထွားလာမသေချာမရေရာ၏ဒီဂရီနှင့်ဆက်စပ်နေသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချစဉ်အတွင်း: တစ်စုံတစ်ယောက်ကသူတို့၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. လျော့နည်းတာသေချာပါလျှင်, သူတို့မြင့် arousal ခံစားရ, သောကျောင်းသား dilate စေ. မျက်စိအတွက်ဤပြောင်းလဲမှုကိုလည်းထုတ်ဖေါ်စေခြင်းငှါ ဘာဆုံးဖြတ်ချက်-ထုတ်လုပ်သူဆိုအကြောင်းပါ: သုတေသီများအုပ်စုတစ်စု, ဥပမာအားဖြင့်, အလိုလိုကြီးထွားလာခြင်းအဘို့အကိုကြည့် '' အဘယ်သူမျှမ '' ဟုဆိုဖို့အသုံးပြုတဲ့သတိထားပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး '' ဟုတ်ကဲ့ '' ဟုပြောဖို့စားမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အကြောင်းရှိသောအခါကဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းရန်လုပ်ကြောင်းတွေ့ရှိ.
ထိုဖြစ်ရပ်အကဲခတ် မျက်စိကိုပင်လူတစ်ဦးစိတျထဲမှာရှိပါတယ်အဘယျသို့အရေအတွက်ကိုခန့်မှန်းကူညီပေးနိုင်ပါသည်. စုဆောင်းဇူးရစ်တက္ကသိုလ်မှ Tobias Loetscher နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် 12 သူတို့တစ်ဦးစာရင်းကိုပယ် reeled စဉ်သူတို့၏မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့် 40 ဂဏန်း.
သူတို့ကသင်တန်းသားများကို '' မျက်စိလှုပ်ရှားမှု၏ညှနျကွားနှင့်အရွယ်အစားကိုတိကျစွာသူတို့ပြောအကြောင်းရှိကြ၏အရေအတွက်ယခင်ထက်ပိုကြီးသို့မဟုတ်သေးငယ်ခဲ့ရှိမရှိခန့်မှန်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ - နှင့်မည်မျှအားဖြင့်. တစ်ခုချင်းစီကိုစေတနာ့ဝန်ထမ်းရဲ့အကြည့်သူတို့တစ်တွေပိုကြီးအရေအတွက်ကပြောပါတယ်ရုံရှေ့တော်၌ထိုညာဘက်တက်ပြောင်းလဲနှင့်, ဆင်းနှင့်တစ်ဦးပိုမိုသေးငယ်တယောက်ရှေ့တော်၌ထိုလက်ဝဲမှ. အခွားသောတခြမ်းအထဲကအဆိုင်းအပိုက​​ြီး, နံပါတ်များအကြားကွာခြားချက်ကြီးမား.
ဒါဟာကျွန်တော်တို့တစ်နည်းနည်းနဲ့အာကာသအတွင်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူဦးနှောက်ထဲမှာစိတ္တဇအရေအတွက်ကိုယ်စားပြုလင့်ထားသောအကြံပြု. သို့သော်လေ့လာမှုပထမဦးဆုံးကြွလာတော်မူသောအကြှနျုပျတို့ကိုမပြောဘူး: တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အရေအတွက်၏စဉ်းစားတွေးခေါ်မျက်စိအနေအထားတွင်အပြောင်းအလဲများဖြစ်ပေါ်စေသည်ရှိမရှိ, ဒါမှမဟုတ်မျက်စိအနေအထားကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုသြဇာလွှမ်းမိုးခြင်းရှိမရှိ. တွင် 2013, ဆွီဒင်နိုင်ငံတွင်သုတေသီများကအလုပ်မှာဖြစ်အံ့သောငှါအဆုံးစွန်သောရဲ့အထောက်အထားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ: မျက်စိလှုပ်ရှားမှုအမှန်တကယ် may မှတ်ဉာဏ်ပြန်လည်ရယူခြင်းလွယ်ကူချောမွေ့.
သူတို့ကစုဆောင်း 24 ကျောင်းသားများနှင့်ဂရုတစိုက်ကွန်ပျူတာမျက်နှာပြင်၏တစ်ထောင့်၌သူတို့ကိုမှပြသ္ထုတစ်ခုစီးရီးဆနျးစစျဖို့အသီးအသီးမေးလျှင်. အဆိုပါသင်တန်းသားများထိုအခါသူတို့သည်မြင်ကြခဲ့တ္ထုအချို့ကို ပတ်သက်. ထုတ်ပြန်ချက်များတစ်စီးရီးကိုနားထောင်မှပြောကြားခဲ့ကြသည်, ထိုကဲ့သို့သော "ဒီကားကိုဘယ်ဘက်မှ facing ခဲ့ပါတယ်" နှင့်အသီးအသီးစစ်မှန်တဲ့သို့မဟုတ်အယူမှားခဲ့လျှင်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ညွှန်ပြခိုင်းအဖြစ်. တချို့ကသင်တန်းသားများကိုသူတို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လွတ်လပ်စွာကျင်လည်ကျက်စေခွင့်ပြုခဲ့ကြ; အခြားသူများကိုမျက်နှာပြင်ရဲ့အလယ်ဗဟိုမှာလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်သူတို့အကြည့် fix ဖို့တောင်းခဲ့ကြ, အရာဝတ္ထုထင်ရှားဘယ်မှာသို့မဟုတ်ထောင့်, ဥပမာအားဖြင့်.
အဆိုပါသုတေသနပညာရှင်များကပြန်လည်သိမ်းဆည်းစဉ်ကာလအတွင်းကောက်ကာငင်ကာသူတို့မျက်မှောက်ရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ကြသောသူတို့အားလက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ် fixed သောသူထက် သာ. သိသိသာသာဖျော်ဖြေကြောင်းတွေ့ရှိ. စိတ်ဝင်စားစရာ, သော်လည်း, အခြားထောင့်၌မိမိတို့အကြည့် fix ပြောတွေထက်အစောပိုင်းကဖျော်ဖြေပိုကောင်းထင်ရှား objects သောမျက်နှာပြင်ရဲ့ထောင့်၌မိမိတို့အကြည့် fix ပြောသူသင်တန်းသားများ. ဤအချက်အလက် encoding ကအတွင်းပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်သင်တန်းသားများကို '' မျက်စိလှုပ်ရှားမှုသတင်းအချက်အလက်များ၏ပြန်လည်ရယူခြင်းကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့သောသူတို့နှင့်အတူစာအဆက်အသွယ်ကြောင်းအကြံပြု, သူတို့တ္ထုကိုသတိရမှာပိုကောင်း. မျက်စိလှုပ်ရှားမှု encoding ၏အချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်တွင်တ္ထုအကြား Spatial ဆက်ဆံရေးကိုမှတ်မိဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီသောကွောငျ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့.
ဤရွေ့ကားမျက်စိလှုပ်ရှားမှုမသိစိတ်ဖြစ်ပွားနိုင်သည်. "လူသူတို့ရှေ့တော်၌ကြုံတွေ့ခဲ့ကြမြင်ကွင်းများမှာရှာဖွေနေကြသောအခါ, သူတို့မျက်စိမကြာခဏသူတို့ပြီးသားမြင်ကြပြီသတင်းအချက်အလက်မှရေးဆွဲနေကြပါတယ်, သူတို့ကမရှိသတိမှတ်ဉာဏ်များပင်ရသောအခါ,"ကပြောပါတယ် ရော်ဂျာ Johansson, လေ့လာမှုကိုဦးဆောင်သူအ Lund တက္ကသိုလ်မှစိတ်ပညာရှင်.
မျက်စိလှုပ်ရှားမှုအကဲခတ်လူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များနေစဉ်ဖို့လည်းသုံးနိုင်တယ်. တစျခုမှာမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုပြသ - ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ဖွယ်ရာအချက်မှာ - မျက်စိ-ခြေရာခံခြင်းမှအမြတ်ထုတ်နိုင် ကျွန်တော်ယူကငျြ့ဝတျဆုံးဖြတ်ချက်များကိုသြဇာလွှမ်းမိုး.
သုတေသီတွေကဒီလို "အစဉ်အဆက်သတ်နိုင်သအဖြစ်ရှုပ်ထွေးသောကိုယ်ကျင့်တရားမေးခွန်းများကိုအပြစ်လွတ်မည်သင်တန်းသားများကိုမေးလျှင်,?"ပြီးတော့ပြသ, ကွန်ပျူတာ screen ပေါ်မှာ, အခြားရွေးချယ်စရာအဖြေကို ("တစ်ခါတစ်ရံမိတာ" သို့မဟုတ် "မိတာဘယ်တော့မှ"). သင်တန်းသားများကို '' မျက်စိလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံခြင်းအားဖြင့်, ထိုသူနှစ်ယောက်အဖြေကိုရွေးချယ်စရာဖယ်ရှားခြင်းတစ်ဦးပါဝင်သူနှစ်ဦးကိုရှေးခယျြစရာတစျခုမှာငေးအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအခြို့သောငွေပမာဏကိုသုံးစွဲခဲ့ချက်ချင်းပြီးနောက်, သုတေသီတို့သည်မိမိတို့အဖြေအဖြစ်ကအထူးသဖြင့် option ကိုပေးသင်တန်းသားများနေစဉ်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရ.
"ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုနောက်တဖန်သတင်းအချက်အလက်ကိုမပေးခဲ့ပါဘူး,"အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ကပြောပါတယ် ဒံယလေကရစ်ချတ်ဆန် University College London မှ၏, လေ့လာမှု၏အကြီးတန်းစာရေးဆရာ. "ကျနော်တို့ကရိုးရိုးမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖြစ်စဉ်များဆက်ရေးရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနှင့်အတိအကျညာဘက်ကိုအမှတ်မှာသူတို့ကိုပြတ်တောက်. ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမယ့်သူတို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချသောအခါအထိန်းချုပ်ထားခြင်းဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ "
ရစ်ချတ်ဆန်အောင်မြင်သော salespeople ဒီသို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိစေခြင်းငှါထည့်သွင်း, နှင့် clients များနှင့်ပိုမိုဖြားယောင်းဖြစ်အသုံးပြုရန်. "ကျနော်တို့ကောင်းသောတွင်လည်းအဖြစ်ဖြားယောင်းလူမျိုး၏ထင်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သည်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ကြည့်နေ,"သူကပြောပါတယ်. "ဒီတစ်ခါလည်းကောင်းသော salespeople သင်တစ်ဦးအချို့သောရှေးခယျြမှုဆီသို့ဦးတည် wavering င်အတိအကျယခုအချိန်တွင်ဆိုတာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်, ပြီးတော့သင်တစ်ဦးလျှော့စျေးဆက်ကပ်သို့မဟုတ်သူတို့၏အစေးကိုပြောင်းလဲ။ "
စမတ်ဖုန်းများနှင့်အခြားလက်-ကျင်းပထုတ်ကုန်များအတွက်မျက်စိ-tracking apps များ၏နေရာတိုင်းတွင်တွေ့နေကြားနေရအဝေးကနေလူတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ပြောင်းလဲ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်. "သင်အွန်လိုင်းစျေးဝယ်နေတယ်ဆိုရင်, သူတို့သင်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ထုတ်ကုန်ရန်သင့်အကြည့်ရွှေ့ယခုအချိန်တွင်အခမဲ့ရေကြောင်းရာပူဇော်သက္ကာအားဖြင့်သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်နေကြပါတယ်ပေလိမ့်မည်။ "
Related: အလှာရဲ့ရွေ့လျားမှု detection စနစ်ယန္တရား Crowdsourcing | mo Costandi
ထို့ကြောင့်, မျက်စိလှုပ်ရှားမှုထိုကဲ့သို့သော memory နဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချအဖြစ်ပိုမိုမြင့်မားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ functions တွေရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနိုင်ပါတယ်နှစ်ဦးစလုံး, နှင့်ငါတို့အတှေးအချေါအပျနှံ, ယုံကြည်ချက်တွေ, နှင့်အလိုဆန္ဒများ. ဒီအသိပညာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ functions တွေတိုးတက်လာ၏နည်းလမ်းများကိုပေးစေခြင်းငှါ - ဒါပေမယ့်လည်းအခြားလူများကသိမ်မွေ့ခြယ်လှယ်ဖို့အားနည်းချက်ကျွန်တော်တို့ကိုအရွက်.
"မျက်စိကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးဖြစ်စဉ်များသို့ပြတင်းပေါက်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏, ကျနော်တို့ရုံသူတို့အထဲကပေါက်ကြားစေခြင်းငှါဘယ်လောက်သတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးထားကြပါဘူး,"ရစ်ချတ်ဆန်ကပြောပါတယ်. "သူတို့ကအလားအလာပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖိနှိပ်ချင်အံ့သောငှါအမှုအရာထုတ်ဖေါ်နိုင်, ထိုကဲ့သို့သောသွယ်ဝိုက်လူမျိုးရေးဘက်လိုက်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ "
"ငါသည်များအတွက်အသုံးပြုလျှက်မျက်စိ-tracking apps များတွေ့နိုင်ပါသည်, ပွောဆို, သငျသညျအဘယျသို့လိုအပ်ပါတယ်ဖုန်းကို function ကိုထွက်တွက်ဆပြီးတော့အထဲကကူညီထောက်ခံနည်းပညာများ,"ဟုသူကထပ်ပြောသည်, "ဒါပေမဲ့သူတို့ကအခြားအမှုအရာရှိသမျှတို့ကိုအမြိုးမြိုးကိုခြေရာခံရန်အသုံးပြုနိုင်ရှိသမျှတို့သည်အချိန်ပေါ်ကျန်ရစ်နေလျှင်. ဒီအများကြီးချမ်းသာသတင်းအချက်အလက်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း, နှင့်မရည်ရွယ်ဘဲတခြားသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြံအစည်မျှဝေ၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေါ်ပေါက်။ "
ဒီတစ်ခုတည်းဖြတ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးအင်္ဂါရပ် ငါ BBC.com/Future အဘို့ရေးထား, သိပ္ပံပညာဖုံးအုပ် website တစ်ခု, ကနျြးမာရေးနဲ့နည်းပညာ.
32419	0 အပိုဒ်, အင်္ဂါရပ်များ, mo Costandi, Neurophilosophy, neuroscience, သိပ္ပံ, သိပ္ပံဘလော့ဂ်ကွန်ယက်ကို
← Microsoft က Windows ကိုပူဇျောပါမညျ 10 အခမဲ့ဇူလိုင်လအတွက် နယူးစမ်းသပ်မှုဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှု၏တစ်ခုလုံးကိုသမိုင်းကိုဖေါ်ပြဖို့အသှေးကိုတစ်ခုတည်းကျဆင်းမှုကိုအသုံးပြုသည် →